I-Luxury Private Pool Apartment Entsha Ebhishi! - I-Airbnb
I-Luxury Private Pool Apartment Entsha Ebhishi!
U-Miguel Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisha likanokusho elisha elinechibi langasese kuvulandi, umqondo omusha wamafulethi e-Punta Cana ozokunikeza ukunethezeka okukhethekile, ubumfihlo nokuvikeleka ukuze usebenzise amaholide akho.Amakamelo avulekile, ikhishi elihlome ngokuphelele, ifenisha yomklami, i-wifi esheshayo, ngena ku-inthanethi ngobuchwepheshe bamuva!
Ngaphandle kokungabaza, isipiliyoni esisha sokuhlala e-Punta Cana ngendlela ehlukile.
Yenza ukubhuka manje noma uxhumane nathi nganoma imiphi imibuzo.
Indawo ekahle, iklabhu yasebhishi enezaphulelo zezivakashi zethu kanye nokufinyelela okuqondile esigcawini esimaphakathi sezindawo zokudlela ezihamba phambili endaweni. Ihlanganisa kahle indawo emaphakathi nendawo eseduze nolwandle.
4.91 · 182 okushiwo abanye
Indawo ephelele! Indawo yaseCorales e-Bávaro ibonakala njengendawo yokuvakasha eyinhloko e-Punta Cana.Ulwandle olubanzi nolumangalisayo olunazo zonke izinhlobo zezinsizakalo ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka efulethini.
Ibhishi, imakethe encane, isevisi yezokuthutha zomphakathi, ukuqashwa kwezimoto nezindawo zokudlela ezisemfashinini khona kanye emnyango (ngaphansi kwemizuzu emi-2 uhamba ngezinyawo)
Umsingathi uyatholakala kunoma yiluphi usizo izivakashi ezingase ziludinge!
Inikeza ubuchwepheshe bakamuva bokufinyelela indlu ngephasiwedi eqondile noma ukhiye wedijithali othunyelwe kumaselula ezivakashi. Ukufinyelela okuphephile nokuphephile ngaphandle kwesidingo sokuthwala okhiye!
Inikeza ubuchwepheshe bakamuva bokufinyelela indlu ngephasiwedi eqondile noma ukhiye wedijith…